download cs 1.6 yekutanga shanduro ► Counter Strike 1.6 Download
Counter-Strike 1.6 inokuvaraidza iwe neakanakisa-munhu wekutanga kupfura chiitiko nenhamba huru yezvombo, mepu, uye mavara ekusarudza kubva. Inosanganisira pfuti, pfuti dzekurova, pfuti dzemuchina unorema, pfuti diki dzemuchina, pfuti, uye pfuti dze sniper kuti iwe ugone kusarudza chombo chakanakisa zvinoenderana nezvaunoda.
Iwe unotanga nepfuti mumutambo wekutanga, uye hauna mari yakakwana yekutenga chero zvimwe zvombo kunze kwegondo remugwenga, saka unofanirwa kuvimba nehunyanzvi hwako uye Glock pistol chete. Mushure mekuhwina round rekutanga, unenge uine mari inokwana kutenga chero chombo chaunoda.
nyanzvi cs 1.6 vatambi vanokurudzira vatambi vatsva kuti vadzivise kutenga pfuti yegondo muchikamu chekutanga uye chengetedza mari yemutambo unotevera. Zvombo zvese zviri mumutambo zvinopa zvakasiyana kudzorera, kukuvadza, uye kurodhazve kumhanya. Iko hakuna sarudzo yakakwana kune ese mamiriro, asi iwe unogona kuedza nezvombo kusarudza zvakakunakira iwe. Heano zvombo zvishanu zvakanakisa mumapoka ese anowanikwa ezvombo mukati Counter-Strike 1.6.
FN Five-sevenN pistol
Chombo ichi chinowanikwa nemazana manomwe nemakumi mashanu emadhora muchitoro chemitambo uye chine magazini inokwana makumi maviri. Inopa iyo yakanyanya kurongeka ichienzaniswa nepistols iripo mumutambo. Isanganise nepfuti kana chero chimwe chombo chepedyo chesarudzo yako kuti uwane mibairo yakanaka.
P90 Sub Machine pfuti
Iyo p90 mutambo weBelgium wakagadzirwa diki-muchina waunogona kutenga nemazana makumi maviri nemazana matatu nemakumi mashanu emadhora counter strike kuuraya vavengi. Inogona kutakura makumi mashanu emaraundi mumagazini imwe chete uye inoratidza mwero wemoto wakakwira kubvisa magazini mumasekonzi mashoma. Iyo recoil yakadzikira zvekuti hautombonzwa kuti urikupfura, uye haina kukanganisa chinangwa chako.
XM1014 ipfuti otomatiki zvinoreva kuti unofanira kuiisazve kamwe chete mushure mekuzadza magazini nemarounds. Kana iwe ukaishandisa kubva kupfupi renji uye kunanga muviri wepamusoro wemuvengi, inouraya zvisinei kana vakapfeka chero giya rekudzivirira zvakare.
AUG Assault pfuti
Pfuti yeAUG inogona kupfura mazana manomwe emarounds muminiti, uye ndiyo yakanakisa sarudzo kana iwe uchida zvepakati-renji kurwa. Ipfuti inorema, saka kumhanya kwehunhu hwako kuchakanganiswa, asi kukuvadzwa kwainoita kunotsiva huremu hwayo.
M249-SAW Machine pfuti
M249-SAW ndiyo inonyanya kudhura mukati counter strike 1.6, iyo inowanikwa muchitoro nemari inodarika zviuru zvishanu zvemadhora iyo inogona kunyanyowandira vatambi vatsva. Inogona kupfura mazana matanhatu emaraundi muminiti uye ine magazini inokwana zana.
G3 / SG-1 Sniper pfuti
G3/SG-1 ndeye otomatiki sniper pfuti ndiyo yakanakisa uye yakaipisisa mumutambo nekuti yakarambidzwa pamaseva mazhinji mazuva ano. Magandanga chete ndiwo anogona kuishongedzera, uye ine nzvimbo inogona kushandiswa yekugonesa kunanga vavengi vari kure.
chikamuImwe post nezve counter strike 1.6
Tagscounter strike 1.6 download cs 1.6 cs 1.6 download cs download download counter-strike download counter-strike 1.6 kurodha cs download cs 1.6 download cs 1.6 shanduro yekutanga Half-Life yepakutanga cs vharafu download